Ibali amelela imishini esetshenziswa ukukala isisetshenziswa ukusetshenziswa ngabathengi, inqobo kokubili endlini eyodwa, indlu kanye endlini. Basuke evamile ihlukaniswe amamitha obschedomovye nayo yonke efulethini.
In the new emafulethini ngokuhambisana zamanje inkampani ukwakhiwa komthetho ubophekile ukufaka kumadivayisi metering, sengathi lokhu imishini ayitholakali, into ngeke bavunyelwe ukusebenza. Esikhathini esidala abanikazi isitokwe nezindlu amafulethi ngokwakho ukufakwa yabo run. Kudinga ukuhlangana abanikazi bezindlu ukuba wenze isinqumo mayelana kokufaka izingxenye ezivamile.
Ezweni lethu njalo ngonyaka ekubeni yamanani ezibizayo ngezisetshenziswa idliwe, futhi kumayelana zonke izifunda, kokubili emaphakathi futhi akude. Izinhlangano ehilelekile ukulawula ukusetshenziswa yabo, udaba invoice ngezimali ezishisiwe umxhwele lapho kubalwa ukusetshenziswa okulinganiselwe ngomuntu ngamunye, hhayi isicelo langempela. Lokhu kuba isizathu esiyinhloko ukufakwa kwamamitha, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi ukuthi ungagcina kule, ngaleyo ndlela esindisa ibhajethi umndeni.
Esinye nesinye isakhamuzi ubophekile ukuba ukhokhele ukusetshenziswa kwemithombo kanye Tinsita, kodwa bambalwa abantu unesifiso overpay. Ibali okwazi ukukuletha ukonga real, futhi akuvumela ukuba lokhozi ubufakazi ukuze ukwazi ukukhetha okukhethwa kukho ukonga ngaphezulu kagesi ukusetshenziswa, igesi noma amanzi.
Labo kakade kumadivayisi metering, it is ukuthi kunemithetho ukufakwa zabo, owaziwa okuyinto zimi kanje:
- imitha kumele abe uphawu olukhethekile ngemuva kokufakwa nasekubekweni uphawu wemfanelo abasebenzi Vodokanal;
- idivayisi avunyelwe ukusetha ngaphakathi 20 cm lisuke emnyango ipayipi ukuze amanzi endlini noma efulethini. Lokhu kuvimbela infeed ipayipi kudivayisi wokulinganisa;
- zidinga inhlangano isheke valve. Isetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi umthengi akakwazi emuva emuva izinkomba, isibonelo ngokusebenzisa vacuum cleaner;
- khona phambi counter isihlungi indawo ukuze libe yisihenqo out isihlabathi nezinhlayiyana indawo. Lokhu kuvimbela umonakalo mechanical kuya izingxenye futhi ngezelela idatha;
- Idivayisi kumele ibe nesitifiketi eRussia. Kungenjalo, umsebenzisi ungathola kuchithwa kulesi simila abasebenzi ukwelashwa amanzi nokuqeda ukubhaliswa zedivayisi.
Kufakiwe igesi amamitha nogesi ochwepheshe igesi umkhakha namandla izitshalo. Kulokhu, libhekisela imithetho jikelele khona kudivayisi iphasipoti, inombolo ye-serial, okuyinto elicacisiwe idokhumenti kumele ifane inombolo idivayisi.
amaqembu noku yezakhamuzi
Njengoba yaziwa, abahlomulayo unelungelo ukukhulula ukufakwa amamitha, futhi zihlanganisa lezi zinhlobo ezilandelayo:
izisulu yokucindezelwa zezombusazwe, iziboshwa emakamu okuhlushwa, abantu avuselelwa, abasebenzi ekhaya phambi, abahlanganyeli yiMpi Enkulu Yobuzwe;
Uwedwa abantu abampofu futhi imikhaya ehola kancane;
abafelokazi Veterans impi;
izakhamuzi asebathatha umhlala ku sokuguga;
imindeni abanokukhubazeka ezincane.
Imikhaya emikhulu banelungelo ukufakwa okukhethekile of amamitha endlini noma efulethini. Kulokhu, ngeke ukhokhiswe ukufakwa, kodwa icala isethaphu iya emndenini, akunandaba noma ngabe wahlanganyela uchwepheshe ngaphandle noma kuzokwenza izakhamuzi ngokwabo.
Okungenhla izigaba okukhethekile of izakhamuzi ukhululeke ngokuphelele ukufaka amamitha amanzi, igesi nogesi. Imali ngeke ukhokhiswe nganoma yiziphi kumadivayisi we-akhawunti noma nenselele abasebenzi. ukubhalisa kufanele kwenziwe ngokushesha emva kokufakwa. Lapho self-kokufaka ukuxhumana inkampani ukuphathwa, uma uchwepheshe wabizelwa ke uyokwenza kumadokhumenti yabo inqubo yokubhalisa.
Iziphathimandla zendawo ezifundeni eziningi zezwe kwethulwa khulula ukufakwa zokubala for labantu, ngoba ukuthi imali eyabelwa kwesabelomali lesifunda. Enhloko-dolobha yase-izikhungo ezinjengalezi azitholakali, kuphela kwezinye izindawo umsebenzi zikhokhelwa ezikhwameni kwesabelomali.
Ukufaka kusezandleni zakho
Kungenzeka ukuba ngokuzimela ukusetha idivayisi metering emanzini, ke kudingeka ukulayisha onguchwepheshe, okuyinto unomthwalo oplombirovka esiphikisayo kanye nokwabiwa ukufunda, kusukela ekuqaleni kosuku, anganikwa futhi umsebenzi uphawu lokubopha. Feza ukufakwa ngezandla zabo ilula, ngokwanele ukuze bakwazi ukubhekana amapayipi amathuluzi.
Ngaphambi kokufaka, imitha kumelwe asinake isikhathi umkhawukho wesikhathi kudivayisi luhlolwe ngumphakathi. Usuku zingatholakala ku uphawu izindlu. Futhi ekutholeni uhlobo nenani ezithothene amadivayisi kunethiwekhi okudingekayo futhi okuzisholo wamanje (RCDs, wesifunda amadlambi) yabo. Kuvunyelwe ukugibela metal, epulasitiki nezihlangu lokhuni. Ukwakhiwa amabhodi, niches amakhabethe kufanele ukunikeza ukufinyelela kulula terminals futhi Transformers zamanje. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi kungenzeka kokufaka eyehlelayo 1 ° kanye lula esikhundleni okwalandela. Umklamo kufanele ondle ukususwa kanye ukufakwa kudivayisi ohlangothini front.
Ngemva self-ukufakwa counter, njengoba kushiwo ngenhla, udinga ukwazisa inhlangano professional abazinikezele ukuba imithombo. Okulandelayo, udinga ukuvakashela akhawunti abaphathi ukwabiwa inkokhelo, futhi silungise ukufakwa kanye imitha ukufundwa usuku.
Ukukhweza amadivayisi metering gas
Wena musa ukufaka igesi amamitha. Isizathu ukuthi kuqhume, ngakho zonke amapayipi kanye namadivayisi, okuyinto zihlobene ukuthuthwa izinto kumele ngokucophelela ngci futhi sizibeke uphawu amalunga omzimba. Ukungasinaki imithetho kubabangele nemiphumela ngeshwa - ukuvuza igesi engase aqhume lapho ukusabela yomoya-mpilo engasetshenziswa noma umlilo. Uma ukunqunywa kuyinto ukufakwa esizimele amamitha, ochwepheshe uyonquma nsiza.
Iyiphi inkampani ukukhetha?
Ngaphambi ukubiza kuchwepheshe ukufaka, kudingeka unqume manje. Kufanele siqaphelisise ukuthi ngokuqinile isiqinisekiso nokugcinwa esimweni esihle kwezinto futhi ukuthi ilayisensi bophezela, ngoba umthwalo esithwele efanele aphume ukufakwa. Futhi, kuyasiza ukuthi ufunde mayelana nokulungiselelwa isenzo kokwenza umsebenzi nesokuphela kwalesi inkontileka.
Electronic amamitha ngamunye kunembile kakhulu uma ziqhathaniswa lokungeniswa. Abaningi ibe isici eyengeziwe elikuvumela ukuxhuma idivayisi othomathikhi iqoqo idatha izinhlelo ze-akhawunti kwezohwebo. Ibali uhlobo elekthronikhi mancane singangena okushisa, operation eziqinile at imithwalo ongaphakeme wenziwa a olunemininingwane ethe xaxa -akhawunti we-amandla kagesi, kanye ukunemba ekilasini abe ukusebenza uhla enkulu.
Isetshenziswa ukulawula amandla apharathasi nge ishaneli yomsakazo (buqamama umsebenzi ukususwa idatha). Agent Sales kagesi esebenzisa idivayisi ekhethekile umfundi Ungasusa ukufundwa ukulawula imitha ngaphandle kokufaka umthengi efulethini.
Uyini imitha amabili-tariff
Kukhona multi-tariff kanye tariff ezimali amayunithi. Eyokuqala bayakwazi ukulondoloza idatha olunembile ku ukusetshenziswa ngezikhathi ezahlukahlukene ngosuku. Bona acabangele zamandla tariff ngabanye "Ubusuku" futhi "Usuku", ukuze umthengi unethuba ebusuku ukusebenzisa ugesi ngesilinganiso encishisiwe.
amathuluzi anjalo ngaphambi kokufakwa kumele zahlelwa ngamaqembu amagatsha, okuyinto usebenza ukusetshenziswa esifundeni. Lezi zigaba futhi yamanani elihambisana kubo zinqunywa ekuphathweni lesifunda.
kudivayisi isithunzi "Imini Nobusuku"
Ngemva obandayo multi-rate imitha umthengi kunenzuzo ukusebenzisa yasendlini Amadivayisi amandla okudla, njengemoto Umshini wokuwasha izitsha nomshini wokuwasha, ama-heater, ama-heater amanzi ebusuku. Omunye-hora kilowatt tariff ebusuku incane kakhulu kuka evamile.
Inenzuzo ezimbili-rate amandla amamitha akuzona abathengi kuphela, kodwa futhi izinkampani amandla ukuze. Into wukuthi emini kukhona umthwalo engalingani ku esiteshini: eliphakeme ebonwe ekuseni nakusihlwa, amandla ebusuku bephoqeleka ukuba inciphise isizukulwane. Ngu engalingani umthwalo ijika ehlupheka isimo lobuchwepheshe imishini. Ngaphezu kwalokho, inkampani amandla ngezikhathi umsebenzi isiqongo iyasebenza at amandla egcwele, kuhlanganise nalezo izakhiwo babe eqolo zokukhiqiza. multi-tariff metering amadivayisi angeziwe ezivamile evumela izinkampani amandla kakhulu ukunciphisa izindleko.
amadivaysi Ukushisa metering
Heat senzelwe uzingela ngobungako ukushisa, kanye sokulinganisa mass kanye izici eziyinhloko we kokupholisayo. Kuye zaba amandla kwandziswa hhayi kuphela umthombo, kodwa futhi abathengi. Umthombo kungaba kubhayela, esiteshini ukushisa wesifunda CHP. Ukuze abathengi zihlanganisa izakhiwo zokuhlala, zomphakathi kanye nezakhiwo zezimboni.
Ukufaka zokubala ezifana ivumela ukulawula izimo zokusebenza wokubacindezela futhi ezishisayo, ukukala izicelo zokuphatha amandla, kanye coolants uphawu nemingcele: ingcindezi, izinga lokushisa, umthamo. Kuqinisekisiwe inzuzo yokufuna ukusetshenziswa eside zedivayisi futhi, ezimweni eziningi kuyazuzisa esikhathini esifushane.